DEG DEG DAAWO:Kulankii Madaxweyne farmaajo iyo RW Khayre Heshiiska Caawa Ay Gaadheen - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDEG DEG DAAWO:Kulankii Madaxweyne farmaajo iyo RW Khayre Heshiiska Caawa Ay Gaadheen
October 21, 2021 News Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 2
Ilo ku dhow dhow Madaxtooyada Villa Somalia ayaa xaqiijinaya inuu hadda kulan u socdo Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble. Kulankan ayaa ka dhashay dadaalo uu waday labadii cisho ee la soo dhaafay Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen.
Kulankan ayaa ah kii u horreeyay ee Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble ee ay yeesheen kaddib wada hadaladii fashilmay ee bishii hore.
Ma cadda kulankan caawa in lagu soo afjarayo khilaafkii xargaha goostay ee sababay kala jabka NISA iyo shaqo ka eryintii Taliyihii hore NISA Fahad Yaasiin ee ka dhalatay kiiskii dilkii Ikraan, taasoo keentay in Madaxweyne Farmaajo ku hagoogto saaxibkiisa koowaad, si uu u badbaadiyo mustaqbalkiisa siyaasadeed.
DEG DEG Ciidankii ugu badna Bada Soomaliya oo tababar Kusoo Qaatay dal Shisheeye Dignin Culus Cadowg
DAAWO VIDEO:Madaxweynaha Kenya oo ku Celiyey Fariin Dagaal Soomaaliya oo Abahii U Diray Somalia 44 Sano Ka hor
Yuu waqtiga ku socdaa? Yuu waqtigu ka lumayaa? Ma Rooble mise Farmaajo?
Dabcan Farmaajo ayuu waqtigu ka lumayaa. Wqtina umaba harin. Marka laba-miirre
Farmaajo waa inuu baryootamaa oo uu maslaxo raadiyaa, doqonka maskaxda ka xanuunsan.
“GOORAYOOY GABBAL KUU DHAC”.
Xagee salaadu ka xirmi la’dahay?
Anigu ninkan rooble umaba haysto nin wax kala socodsiin kara oo waxaan u haystay nin garana waxa meesha loo keenay waxay ahayd.
Ugu horey Mr Maxamed xuseen waa nin wanaagsan oon wax xumaan ah lahayn, balse halkaas ayay arintiisu ku egtahay, waayo markuu kursiga yimid oo aqbalay waxay ahayd inuu garto awoodiisa iyo waxa laga filayo.
waxa laga filayaa waxay ahayd inuu dadka isu keeno dooranashana meesha u diyaariyo inta u dhaxaysana u daayo dadka shaqada wada inay hawshooda sii wataan. Markiiba wuxuu bilaabay keenya iyo shaqooyin aan loo dirsan inuu ku dhexdhoco, kadibna inuu dawladii dhexdeedii sidii mukulaal meesha kusoo dhexdhacday uu kala faaqido isagoo leh waxaan bedelayaa wasiiro iyo janano aysanba ahayn awoodiisa iyo wixii loo diray. Kadibna hadba intuu dayniile iyo meelo kale tago inuu dadkii qabiil ku abuuro aan jirin.
Marka ninkani dad ma wadi karaa? islamarkiiba waxaa la geliyay ama isagu uu isgaliyay cadifad aan loo baahnayn, shaadh kawayna wuu gashaday.
Aniga hadaba waxay ila tahay in meesha laga saaro oon waqti danbe la isaga lumin.
Farmaajo tii badana wuu ku guulaystay, tii kale ee ahayd dalku inuu degana waxaad ka garan kartaa dhaqaalaha.
Farmaajo nin madaxda aduunka la fadhiisan kara, a presentable man’.